I-1 Blogging Blog ehlanganisiwe: Douglas Karr
Izindonga Zamadwala noZach Downs kusuka I-Twelve Stars Media yehlela ku Highbridge office futhi shutha ividiyo kaChantelle nami ngamavidiyo ambalwa esifuna ukuwafaka ku- Amathiphu Wokubloga Okubumbene indawo.
Lesi bekuyisikhathi esimnandi. Akukho okuqukethwe okwabhalwa futhi akuzange kuzilolonge. Sibuyekeze izinhloso zethu ngaphambi kokuthwebula:
Thuthukisa ukukhishwa kwencwadi, Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies.
Thuthukisa isayithi kanye nokubhuloga kwezinkampani ku Twitter futhi Facebook.
Phromotha mina noChantelle sikhuluma futhi sifundisa izinkampani ku Ukubhuloga Kwebhizinisi amasu.
Kunamavidiyo amabili. UChantelle ugxile kwezimbili zezinhloso kwividiyo yakhe futhi ngigxile kwezimbili zezinhloso zami. Sizokhombisa ividiyo kaChantelle ntambama noma ungayibuka kuyo Amathiphu Wokubloga Okubumbene. URocky wenze ingxoxo (uzobona ukuthi empeleni akaveli kuvidiyo!) Wabe esesisiza ekucwengiseni izimpendulo ngokusebenzisa ezimbalwa ezithatha ngayinye. Umphumela wokugcina, kanye nokuhlelwa okuthile okumnandi, bekungubuciko wobuciko obubona ngenhla!
Tags: Izinkanyezi eziyi-12 zemidiyaukubhuloga ezinkampaniukubhuloga ezinkampani kwama-dummiesdouglas karrDummieswiley